Ikhabhathi yoMlambo #3 Umgama wokuHamba ukuya eDominical Beach - I-Airbnb
Ikhabhathi yoMlambo #3 Umgama wokuHamba ukuya eDominical Beach
Igumbi lakho lokulala e indlu yamaplanga sinombuki zindwendwe onguMaricela
I-95% yeendwendwe zakutshanje inike uMaricela iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ikhabhinethi yethu yeDominical iza nayo yonke into oyifunayo ukusuka kwiifeni zesilingi, iitawuli zokuhlambela, isepha, ishampu, ibalcony yabucala, kunye ne-a/c yokukupholisa emva kosuku olude elunxwemeni. Ikhabhinethi yethu ibekwe ecaleni komlambo iBaru apho unokuyonwabela ikofu yakho yasekuseni okanye uhambe uhambe ekuseni kwaye ubukele iintaka zehlathi ziphila. Ibekwe ngokufanelekileyo kumgama wokuhamba ukuya kuyo yonke idolophu kodwa igcinwe kude ukuze ikunike ubumfihlo obufaneleyo kwiholide yakho yaseCosta Rican. Qaba izihlangu zakho kwaye uphumle!
Ikhabhathi yethu iza nedekhi yabucala apho unokufunda khona incwadi kunye negumbi lokuphumla phantsi kwecanopy yemithi emikhulu ngokumangalisayo. Igumbi lihle kwaye licocekile nangona kunjalo sifumaneka edolophini kunye nestudiyo sokudanisa kwisakhiwo ngoko ke emini uya kuva abantwana bedanisa kwaye ebusuku ungafumana umculo kwibhari emalunga neeyadi ezili-100-150 kude.
4.88 · Izimvo eziyi-77
Iplaza ekufutshane, iLali apho iikhabhinethi zethu zikhoyo uya kufumana ivenkile yokutya yezempilo kaMama Toucans, iSushi, iMono Congo Cafe, iPhat Noodle Thai yokutyela, istudiyo seRock Star yoga, iATM, iiFish Tacos, kunye nenani leevenkile zezikhumbuzo. Indawo yayo yeentsapho, abantwana, kunye nabahambi ngokufanayo ukuba bayonwabele.
Umbuki zindwendwe ngu- Maricela
Sifumaneka ngemibuzo, iingcebiso, okanye ukuba kukho imiba efikayo ngamagumbi akho.